Zvinonyanya kushandisa mashanduri ekushandura mutauro kunyoresa. Aya ndiwo mutauro wakanakisisa wokutumira mushanduri ekukumbira - izwi kune mavara kutendeuka matanho anokubvumira kuti utange zvakananga iwe paunoti shoko rakasiyana.
1. Google Docs Voice kuMagwaro
Iwe unogona kuverenga uye kuronga nekutaura muGoogle Docs kana mumatauri ekupikisa weGoogle Slides. Ichi chinongowanikwa chete muGoogle browsers. Ingoshandura maikorofoni yako uye utange izwi kuverenga mudhipi. Vhura dhidhiyo muGoogle Docs ine Chrome browser. Iye zvino chengeta Zvishandise uye ipapo kuverenga kwezwi. Bhokisi re microphone rinooneka. Kana wagadzirira kutaura, tora maikorofoni. Nyora chirevo kuti utaure zvakajeka, pamusana wehuwandu hwemazwi uye nhanho (ona pasi apa kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekushandisa nguva dzekushandisa). Kana wapedza, tora maikorofoni zvakare.
Unogona kushandisa izwi rekunyora kana mirairo yezwi. Mushure mokunge utanga kuverenga izwi, unogona kushandisa mirairo yekugadzirisa nekugadzirisa dhidhiro yako. Somuenzaniso, "Sarudza ndima," "itariki," kana "Enda kumagumo emutsara." Ndapota ona kuti mirairo yezwi inowanika muChirungu chete. Rurimi rwemabhuku uye rurimi rwemagwaro zvinofanira kuva zvose Chirungu. Uyewo, izwi rinorayira hariwanikwi mumatauri ekutaura kweSlides.
Shandisa zvinyorwa kuti uchinje mashoko akataurwa mumagwaro pane chero paPC yako Windows 10. Kutanga kuraira, sarudza ndima yemavara uye pinda iyo Windows logo kiyi + H kuvhura yekuraira bharanzi. Wobva wataura zvese zviri pamoyo pako. Kana iwe uri kushandisa piritsi kana yekubata-skrini, tinya maikorofoni bhatani pane yekubata keyboard kutanga kuraira. Tinya zvakare kumisa kuraira. Unogona zvakare kurega kuraira chero nguva uchiti "mira kuraira." Kufungidzira kunowanikwa muUS Chirungu chete. Kuti uishandise, PC yako inoda kuve yakabatana neinternet.
Speechnotes kutaura kune simba kune mameseji epamhepo notepad sekushandisa. Iyo inyanzvi uye yemahara yekutaura yekucherechedza chinyorwa edhari yekuraira uye typing Speechnotes inesimba yekutaura-inogoneswa online notepad, yakagadzirirwa kupa simba mazano ako nekushandisa yakachena & inoshanda dhizaini, kuti ugone kutarisa pane ako pfungwa. Iko kunyorera kunoshanda zvachose online mune yako Chrome browser. Hapana kurodha pasi, hapana kuisa uye kunyangwe hapana kunyoreswa kunodiwa, kuti utange kushanda ipapo ipapo. Speechnotes inonyanya kugadzirirwa kukupa iwe inokanganisa-isina nharaunda.
Mhemberero imwe neimwe, inotanga nemapepa matsva akachena akachena, kuitira kuti pfungwa dzako dzive nehana yakachena. Zvimwe zvose zvinyorwa asi zvinyorwa zvacho pachazvo hazvisati zvaonekwa nekuderera kunze, saka iwe unogona kuisa pfungwa pazvinhu zvakakosha zvikuru - iwe pachako unogadzira.
Mukuwedzera kune izvozvo, kutaura panzvimbo yekunyora, kunoita kuti iwe ufunge uye utaure zviri nyore, usingabvhiringidzi, izvo zvinokurudzira zvakare kugadzirisa, kufungisisa zvakajeka. Fonti uye mavara kumativi ese ega app yakagadzirirwa kuva akajeka uye ane unhu hwakanaka hwekunzwisisa.
Dictation inonyora mutauro wako kutumira panguva chaiyo. Mumwe anogona kuwedzera ndima, mapepa, uye kunyange smileys achishandisa mirairo yezwi. Kuraira kunogona kuziva nekunyora mitauro yakakurumbira kusanganisira Shona, Español, Français, Italiano, Português, हिन्दी, தமிழ், اردو, বাংলা, ગુજરાતી, ಕನ್ನಡ, uye nezvimwe.
Mumwe anogona kuwedzera ndima itsva, zviratidzo zvepumburu, kunyemwerera uye vamwe vanhu vakananga vachishandisa mazwi ari nyore. Semuenzaniso, taura "Mutsara mutsva" kuti uendese chikwangwani kune chinyorwa chinotevera kana kuti kuti "Face Smiling" kuti uise smiley. Ona urongwa hwezwi runotsigirwa nemirairo.
Dictation inoshandisa Google Speech Recognition kuti inyore mazwi ako ataurwa kuva mavara. Iyo inochengetedza zvinyorwa zvakashandurwa mu browser yako munharaunda uye hapana deta inoshandiswa kupi zvako.
Inzwi notibhuku rinozivikanwa izwi kunyorera kushandura mutauro kuita mameseji - kutaura kune mameseji emaWebhusaiti, Windows, Mac uye Linux OS. Iyo inogona zvakare kushandura odhiyo faira kune mameseji. Iyo yazvino vhezheni inoshanda chete kune iyo Chrome browser mu Windows, Mac neLinux OS (yevashandisi veApple neIOS pane akakosha eApple, maapplication eIOS).
Chibvumirano chinogona kuziva mutauro wakabatanidzwa mu HTML5 video uye audio kana muzvikamu zve YouTube. Taurai URL ye HTML5 audio nevhidhiyo yeklip, kana kuti tora faira kubva kombiyuta yako. Kune YouTube mavhidhiyo, tsanangurai rekodi yeYouTube. Ipapo iwe unogona kutanga kutenderera nekudhinda Start Start button.
Kuisa kabhuku kemazwi Chrome kuwedzeredzwa kunoita kuti iwe ushandise kupinza kwezwi kune chero ndima yekupinda mameseji pane chero webhusaiti. Kuisa Windows, Mac kana Linux module yekubatanidza inokutendera iwe kushandisa izwi kuisa mameseji mune chero application yeaya OS.
Best Tools Kuti Ude Kutaura Kunyorera - Voice To Text Tools pakutanga akaiswa pa Kunobva Digit - Dzazvino Tekinoroji, Gadgets & Gizmos.
7 Nzira dzeKuchengetedza Mufananidzo Kubva kuGoogle Docs
Nzira yekushandisa Dictation pa Mac